लेबलिंग मेशीन - Npoat.com
तपाईंको लेबल तपाईंको उत्पादको अनुहार हो। यो के हो जुन तपाइँको ग्राहक लाई तपाइँको उत्पादन छनौट गर्न आकर्षित गर्दछ। तपाईको लेबलिंग सहि गर्नुहोस्, प्रत्येक समय तपाईको व्यावसायको लागी धेरै महत्वपूर्ण छ। NPACK मा हामी जान्दछौं तपाईं छिटो र प्रभावकारी परिणामहरू प्रदान गर्दै सटीक र सही मेशिनहरूमा निर्भर हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि जब तपाइँसँग प्रश्नहरू छन्, तपाइँलाई तपाइँको मेशिनहरू चिनेका व्यक्तिहरूबाट द्रुत उत्तरहरू चाहिन्छ।
NPACK लेबलिंग उपकरणको एक विस्तृत प्रकारको स्वतः निर्माण र कन्टेनर प्रकार को एक विस्तृत वर्गीकरण मा सबै लेबल प्रकार सुरक्षित गर्न विनिर्माण गर्दछ। एनपीएसीके लेबलि machines मेशिनहरूले अझ नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ मार्केटमा सब भन्दा चाँडो र सब भन्दा सटीक लेबल बोतलहरू प्राप्त गर्न।
जब तपाइँ NPACK बाट लेबलिंग मेशिन प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाइँसँग उही व्यक्तिहरूसँग डायरेक्ट लाइन हुनेछ जसले तपाइँको मेशिनहरू डिजाईन र भेला गरे। हामी यहाँ छौं बिक्री पछि लामो सेवा प्रदान गर्न। जब तपाईं NPACK सँग पार्टनर गर्नुहुन्छ, तपाईं हाम्रो व्यवसायको अंश बन्नुहुन्छ। कम्पनी छनौट गर्नुहोस् जुन १० बर्ष भन्दा बढी बर्षको लागि मशीनहरू एसेम्बलिंग र डिजाईन गर्दै छ। किन एउटा विदेशी निगम छनौट गर्दछ जुन केवल एक आकार फिट - सबै समाधान प्रस्ताव गर्दछ? NPACK ले तपाईंलाई अनुकूलन समाधान र व्यक्तिगत सेवा प्रदान गर्दछ। त्यो इन-लाइन भिन्नता हो!
विशेषज्ञ लेबलिंग उपकरण उत्पादकहरूको रूपमा, हामी लेबलिंग मेशिनहरूको एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछौं जुन तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। तिनीहरू हाम्रो अन्य प्रणालीहरूमा निर्बाध रूपमा काम गर्दछन्, ताकि तपाईंसँग एक पूर्ण असेंबली लाइन हुन सक्छ जुन तपाईंको उत्पादनलाई द्रुत र उत्तम रूपमा, प्रत्येक चोटि पठाउन तयार हुन्छ। हाम्रो मेशिनको बहुमुखी प्रतिभाको साथ, तपाईं आफ्नो विशिष्ट प्रक्रिया पूरा गर्न आफ्नो एकाई दर्जी गर्न सक्नुहुनेछ।
तातो बिक्री स्वत: कागज चिपकाउने चिपकने लेबल बोतल लेबलिंग मीटर ...
पूर्ण स्वचालित गीला गोंद लेबलिंग मेशीन / लेबलर
सानो बोतल लेबलि machine मेशीन / सानो पार्ने स्लीभ बोतल लेबल ...
उच्च गति स्वत: स्टीकर लेबलिंग मेशीन प्याकिंग गर्दै
बोतलहरूका लागि स्वत: स्वयं चिपकने लेबलिing मेशिन
ठाडो प्रकार स्वत: राउन्ड कन्टेनर लेबलिंग मेशीन
स्वचालित स्टिकर बोतल गत्तेकोठा माथि सतह लेबलिंग मेशीन
स्वचालित गिलास बोतल भिजे गोंद लेबलिंग मेशीन
स्वचालित तेर्सो बल पेन र एम्पौल बोतल स्टिकर प्रयोगशाला ...
यसको लागि स्वचालित गोल बोतल रोटरी स्टीकर लेबलिंग मेशीन ...
स्वचालित रोटरी चिपकने वाला स्टिकर स्थिर स्थिति लेबलिंग मा ...
NPACK स्वचालित गोल बोतल स्टीकर लेबलिंग मेशीन
फ्ल्याट शीर्ष साइड सेल्फ चिपकने लेबलिंग मेशीन
स्वचालित डबल साइड वर्ग बोतल लेबलिंग मशीन
स्वचालित राउन्ड ग्लास जार उच्च गति गीला गोंद सेल्फ-चिपकने वाला ...
पूर्ण स्वचालित स्वयं चिपकने वाला स्टीकर लेबल संलग्न संलग्न मच ...
स्वचालित फ्रन्ट र पछाडि दुई साईड लेबलिंग मेशीन
उच्च गुणवत्ता पूर्ण स्वत: एम्पौल लेबलिंग मेशीन